Maamulada Puntland iyo Somaliland oo isku khilaafsan dagaallada Kalshaale iyo labada dhinac oo is eedeeyay | raascasayrmedia.com
← Garoonka diyaaradaha Muqdisho oo la casriyeeyay (Sawiro )
Xildhibaannada Baarlamaanka Soomaaliya oo codsaday in la joojiyo colaadda ka taagan deegaanka Kalshaale →
Wasiirka kalluumaysiga Puntland Inj. Maxamed Saalax Aadan oo maanta la hadlay BBC-da ayaa ka hadlay khasaaraha ka dhashay dagaalladii shalay ka dhacay deegaanka Kalshaale, isaga oo ku sugan degmada Buuhoodle ee gobolka Cayn.
“Khasaaraha ka dhashay dagaalka waxa uu ahaa mid badan ,balse waxaa jira dad la dawaynayo oo ciidamada Somaliland ay xasuuqeen “ayuu yiri wasiirka oo dhinacyo badan ka hadlay.
“Waxaa muqadas ah in Puntland ay difaacdo dhulkeeda ,balse kuuma sheegi karo in aan dagaal galayno “ayuu hadalkiisa ku daray Maxamed Saalax Aadan. Wasiirka ayaa sheegay in booqashada ay ku yimaadeen Buuhoodle ay tahay mid ay ku qiimnaynaan khasaaraha ka dhashay dagaalladii Kalshaale iyo abaaraha si biyo dhaamin loo sameeyo.
“Puntland hadii aysan faragalinta joojin uma dulqaadan doono oo waan iska dhicin doonaa “ayuu yiri wasiirka oo ay ka muuqatay caro aad u daran oo la xiriirta dagaallada halkaasi ka dhacay.